Sannadkii Modric Xaday Indhaha Dunida
HomeWararka MaantaSannadkii Modric Xaday Indhaha Dunida
Sannadka dhamaadka ah ee 2016, ciyaartooyada uu ugu suntan yahay sannadkoodii ugu wanaagsanaa intii ay kubadda cagta ku jiraan, waxa ka mid ah Luka Modric oo qaatay 12 bilood oo kubbad-samayntiisa, bandhig ciyaareedkiisa iyo sida uu ula najaxay kooxdiisu aanay hore usoo marin.
Afartii sannadoood ee uu u ciyaarayey Real Madrid tan iyo markii uu ka soo wareegay Tottenham Hotspur, xiddiga reer Croatia waxa uu kasbaday jacaylka taageereyaal badan iyo in loo arkay inuu ka mid yahay xiddigaha Madrid aanay la’aantoos guulo gaadhi karin.
Taageereyaasha kooxda Los Blancos, marka ay garoonka imanayaan si ay u daawadaan ciyaaraha naadigooda, way adag tahay in laga waayo garan uu ku qoran yahay lambarka Modric.
2016, ka sokow inuu naadigiisa la qaaday Champions League iyo laba koob oo kale, waxa xusuusta ugu jirta goolkii quruxda badnaa ee uu Euro 2016 u dhaliyey xulka qarankiisa kulankii Turkey iyo sidii uu uga soo saaray group adag, ka hor intii aanay Portugal reebin.
Markii uu bilaabmayey sannadkan dhamaadka ahi, waxay kooxdiisa Real Madrid xili ciyaareedkeeda bilowday iyadoo uu Modric dhaawac jilibka ah u jiifo muddo dhawr bilood ahna waxa uu ku qaatay dhakhtarka qalliin lagu sameeyey awgeed. Markii uu soo laabtay, kooxda oo dhan ayey kubaddeedu isbeddeashay, waxaanay soo gunaanadeen sannado badan oo aanay guulahan oo kale arag.
Codbixin wargeyska Marca uu ka ururiyey waddanka Spain ka hor intii aan la shaacinin ciyaartoyga xiddiga adduunka ee sannadka inuu ku guuleystay Cristiano Ronaldo, intooda badan waxay u codeeyeen in Modric la guddoonsiiyo abaalmarinta ciyaartoyga ugu fiican.